Ukhenketho lwefektri - Shenzhen Chinaok Izixhobo zombane Co., Ltd.
Mhlawumbi ufuna ukwazi ukuba isicwangciso sefektri sivelise ngokufanelekileyo ii-odolo zabathengi, ngokujonga ixesha lokuthenga kunye nemveliso, amandla omsebenzi, amandla afumanekayo, njl.njl. Ukuhanjiswa kwexesha. Iqela lethu lemveliso linezicwangciso zeveki ngokwezicelo zentengiso kunye namandla emveliso, ngaphezulu kwe-90% ye-OTD yafezekiswa.
Umzi-mveliso uqhuba inkqubo yolawulo ngokucinga okusekwe kumngcipheko, umz.
Umzi-mveliso ulungiselele izixhobo ezifanelekileyo, izixhobo zokusebenza, itsheki esemgceni (kwisithuba seeyure ezi-2), i-100% itshekhi epheleleyo yovavanyo lokujonga kunye novavanyo lwentsebenzo ngokwesicwangciso. Nangona kunjalo, i-1, ukunqongophala kwamalungiselelo okulinganisa kwimigca ye-SMT yokuguqula ubushushu; 2, isilela kulungelelwaniso lobunzima be-solder kwaye ixhomekeke kuphela kuvavanyo lweemveliso; 3, ngokudibanisa umgca, akukho bungqina bubonisa ukuba i-IPQC inokwenziwa ngexesha elifanelekileyo.
Umzi-mveliso uchaze ukwenziwa kwe-WI okuyimfuneko kunye nokuhlolwa kwe-SOP, iisampulu zesalathiso njl.njl. itshekhi ebonakalayo, itshekhi yeCDF, uvavanyo lomsebenzi njl.
I-QA ichaze yaza yaphumeza i-FQC SOP yokulawula ukuhlolwa kokugqibela kweemveliso, kubandakanya isampulu yesicwangciso kunye ne-AQL, into yokuhlola kunye nendlela, inkqubo yokulahla. Izinto zokuhlola ze-FQC zibandakanya itsheki ebonakalayo, uvavanyo lokusebenza kombane, uvavanyo lokuguga, uvavanyo lwamandla, uvavanyo lobungakanani njl.
Ngaphambi kokuhambisa iimpahla kubathengi, siya kuqhuba uvavanyo lwe-100% kunye neMigangatho yovavanyo lweSampulu yovavanyo.